I-Semalt-Amandla okunyusa e-SEO
I-Semalt namhlanje, sisisombululo esifanelekileyo sokwazisa iindawo kwi-injini yokukhangela zikaGoogle. Iinkonzo zethu zibandakanya okungaphezulu kokufumana nje i-SEO ngokusebenzisa izixhobo kunye neendlela ezaziwayo, siye saqulunqa iseti yamanyathelo angenakuthelekiswa nanto ekusetyenzisweni ngempumelelo kuyo nayiphi na iprojekthi yezentengiso. Ngamanye amagama, uSemalt yiarhente yentengiso yedijithali enamava eminyaka yokunyusa kwe-SEO.
Iinkonzo zethu zazisetyenziswa ngabanini beziza ezingaphezu kwesigidi. Inkampani isebenzisa iqela elikhulu labachwephesha, ibonelela ngobuchule obahlukeneyo: iingcali ze-SEO, iingcali ze-IT, abaphathi bezentengiso, abaqulunqi bewebhu, ababhali bekopi, iingcali zeeLwimi, nkqu neenkosi zoopopayi. Kucacile ukuba yonke into ibaluleke kakhulu, ke ngoko, ukusebenza kweshishini lakho kuxhomekeke ngqo kwintsebenziswano noSemalt.
Ukuqonda imigaqo-siseko yenkonzo yethu, kufuneka ube nombono osisiseko wezinto ze-SEO kunye nendlela ezisebenza ngayo. Makhe sijonge amanqaku aphezulu. UkuKhangela kweNjini yokuKhangela iseti yamanyathelo okuphucula isikhundla sewebhusayithi kwi-injini yokukhangela ngamagama aphambili. Eyona njongo iphambili yokukhuthaza i-SEO kukutsala abathengi kwindawo ukusuka kwiinjini zokukhangela. Umsebenzi wokuqala wokukhuthaza ukukhangela ukukhupha imixholo esemgangathweni ukwenza iwebhusayithi ifikelele kwizikhundla eziphezulu kwi-injini yokukhangela.
Ukusebenza kwe-SEO kugxilwe ekwandiseni ukugcwala kwesiza, oko kukuthi, kukwandisa inani labantu abatyelele iwebhusayithi kwiiyunithi yexesha. Indawo yesayithi kwi-injini yokukhangela kwizicelo ezithile eziphambili kunye nenani lezithuthi ezibonisa ukubonwa kwesiza. Iinjini zokukhangela zisebenza inani elikhulu leeparamitha. Okwangoku, ukwenziwa kweinjini yokukhangela kwenziwa ngezinto zangaphakathi nangaphandle.
Izinto eziphambili zangaphakathi zisebenza ngokuthe ngqo kwiwebhusayithi yomnini. Ukunyusa, kule meko, kuthetha ukuphuculwa kweempawu zobugcisa, ukuzoba imeko enengqondo, ukubeka amakhonkco angaphakathi, ukulungiselela umxholo oluncedo kunye nomgangatho.
Izinto ezisemgangathweni zangaphandle kukwandiswa kwesiza kusetyenziswa ezinye izibonelelo. Inyathelo eliphambili kukufumana amakhonkco avela ngaphandle aya kukhokelela kumaphepha akho ewebhu.
Izinto ezisemgangathweni zangaphandle kukwandiswa kwesiza kusetyenziswa ezinye izibonelelo. Isinyathelo sokuqala kukufumana amakhonkco avela ngaphandle aya kukhokelela kumaphepha akho ewebhu. Umsebenzi we-Semalt kukuthatha zonke izinto kwaye ufumane iseti yezenzo eziyimfuneko kusetyenziswa izixhobo ezizodwa. Ngapha koko, ubunzima bokwenza oku kuya kukhokelela indawo kwizikhundla eziphezulu. Abo bafuna ukuphumelela kwishishini abahlali benokuqonda okwaneleyo kwe-SEO. Isisombululo esifanelekileyo kubo sinokuthatha ithuba lobuchwephesha beSemalt, ukusebenza kakuhle kwabo kuqinisekiswe ziziphumo ezibonakalayo.
Wenza ntoni uSemalt
Iindawo eziphambili ngokubaluleka kwethu kukhethekileyo zibandakanya:
ividiyo yokukhuthaza ishishini lakho;
Ukunyusa indawo, uSemalt udale iindlela ezizodwa zokubona kwangaphambili iziphumo ngaphambi kokutyalomali kwishishini. Amava amakhulu kwishishini le-SEO kunye nolwazi lokuthengisa luvumela inkampani ukuba ibe ngumqambi wezisombululo ze-SEO, ezinje ngeA AutoSEO, i-FullSEO. Jonga izibonelelo zeli phulo.
Ukushwankathela amaxabiso eli phulo sinokuqaqambisa izibonelelo eziphambili ezinokuthi zithathwe kuwo:
ukwenza izingqinisiso kwiiwebhusayithi ezinxulumene niche;
Inkqubo ye- AutoSEO yenziwa ngolu hlobo lulandelayo: Nje ukuba ubhalise, umhlalutyi wesiza uya kunika ingxelo emfutshane ngobume bewebhusayithi ngokuxhomekeke kwimigangatho ye-SEO. Olu lwazi, nalo, luya kunceda ukuphucula isikhundla sakho kuGoogle. Umphathi wakho, kunye nomcebisi we-SEO, uya kuqhuba uphononongo olululo lwewebhusayithi yakho kwaye uya kwenza uluhlu lokujonga iimpazamo ekufuneka zilungisiwe. Injini ye-SEO inyula amagama aphambili afanelekileyo ukuze kukhawuleziswe ukugcwala kwiwebhusayithi.
Itekhnoloji ethe xhaxhe ngokuthe rhoqo ifaka amakhonkco e-intanethi kunye nomxholo ofanelekileyo kwizibonelelo ezahlukeneyo ze-Intanethi. Iziphumo ezigqwesileyo zifezekiswa ngokudibanisa zonke iilinki kwimixholo ekhethekileyo. I-Semalt ineendawo eziphantse zibe ngama-70,000 ezikumaqabane ezikumgangatho ophezulu ngezihloko ezininzi ezisasazwa ngokuhambelana nobudala besizinda. Sisoloko sibeka iliso kwikhonkco lonxibelelwano kunye nendawo yazo kwiinjini zokukhangela. Iindidi zonxibelelwano zifakwe kolu luhlu lulandelayo:
Iipesenti ezingama-40 - izikhonkwane ze-anchor;
Iipesenti ezingama-50 - amakhonkco aqhelekileyo;
Iipesenti ezili-10 zokuchonga uphawu.
Emva kokubonelela nge-FTP okanye ulawulo lwepaneli ye-CMS, iinjineli zeSemalt zenze utshintsho oluchaziweyo, olwaboniswa kwingxelo yewebhusayithi. Utshintsho olugqityiwe kwiwebhusayithi yakho ngenxa yokucebisa umhlalutyi wethu kunye nabacebisi be-SEO baqinisekisa umkhankaso we-AutoSEO onemveliso. I-Semalt iqhuba ukuphuculwa kwinqanaba lemihla ngemihla equkethe amagama aphambili ukuze uhlale unolwazi malunga nokuqhubela phambili kwephulo le-SEO.
Umphathi kaSemalt uhlala ehlolisisa inkqubo ye-AutoSEO, ebonelela ngomniniyo we-imeyile nge-imeyile okanye ngesaziso sangaphakathi sokwazisa. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amaxabiso enyusa zonke iiprojekthi yi- $ 99 ngenyanga. Ngexesha lokulinga, umkhankaso we-AutoSEO weprojekthi enye uxabisa i- $ 0.99.
I-FullSEO ibonakaliswe njengeeseti zeenkqubo zangaphakathi kunye nezangaphandle zokuphucula iwebhusayithi ezivelisa impumelelo engathethekiyo ngexesha elifutshane. Iingcali ziya kwenza zombini ukusebenza ngaphakathi nangaphandle, iimpazamo ezichanekileyo, kunye nokubhala izicatshulwa ngokweenkcukacha ze-SEO. Ngenxa yoko, ishishini lakho elikwi-Intanethi liya kuqhubela phambili malunga neenyanga ezimbalwa. Ngomkhankaso we-FullSEO , umyinge weengeniso zemali uyonyuka kakhulu, ke ukubuya kwemali kutyalo mali kungaphezulu kwe-700%.
Ukuqalisa iphulo le-FullSEO kukuvumela ukuba uthathe isikhundla esikhokelayo kwicandelo lezentengiso, ukongela abo bakhuphisana nabo kude kakhulu. Le nkqubo yokuhlaziya iwebhu iya kuzisa iziphumo ezizizo kuwe kwangoko. I-Semalt izakwenza ukuba uqapheleke kubathengi abanokubakho.
Emva kobhaliso, inkqubo yethu yohlalutyo iya kunika ingxelo emfutshane malunga nokwakhiwa kwewebhusayithi kulandelwa imigangatho yobunjineli be-SEO. Kwakhona, umphathi wakho, ehamba kunye nengcali ye-SEO, uya kuqhuba uvavanyo olupheleleyo lwe-semantic yendawo yakho, ukumiselwa kwayo, ichonge eyona nto iphambili.
Ngelixa benza i-registry ye-bugs ekufuneka ilungisiwe, umphuhlisi we-SEO umisela amagama agcina ukugcwala kwitrafikhi. Indawo yakho ye-Intanethi iyanyanzeleka ukuba yenziwe ngokupheleleyo ngaphakathi malunga nawo onke amabakala acetyiswayo kwi-FullSEO. Emva kokufumana i-FTP kunye ne-CMS yolawulo lokufikelela kwiipaneli, abaqulunqi bethu benza izilungiso ezichongiweyo kwisishwankathelo kwiwebhusayithi yakho, gcina ukufezekiswa kwenkqubo yakho ye-FullSEO.
Ukusebenza kwangaphandle: iingcali zethu ze-SEO ziqala ukufakela amakhonkco kwizixhobo zewebhu ezihlanganisiweyo, ezifanelekileyo kumxholo wesayithi lakho. Amakhonkco afakiweyo adityaniswa kumxholo okhethekileyo, ke, kukunceda ukuba ufumane iziphumo ezigqibeleleyo. Inkampani inenamba engenakubalwa yeendawo ezihlangeneyo ezintle kuzo zonke iintlobo ze-niches, ezihlelwe ngokwezifiso ngokobude besizinda sobukho kunye ne-Google Trust Rank.
Ukwakhiwa kwekhonkco okwenziwa rhoqo ngenxa yomlinganiselo:
Iipesenti ezili-10 - uphawu lwelabhu yokuthengisa.
Umlawuli wakho ngamnye ulawula ngokuthe ngqo kumkhankaso wakho njengenxalenye yenkqubo, aphucula uluhlu lwezikhundla zamagama aphambili, ukuzisa iingxelo ezithile, ukwazisa ngokukhula komkhankaso we-SEO. Umlawuli uhlala enxibelelana nawe imini nobusuku.
Kwimeko apho uyekisa ukunyusa i-SEO, zonke ii-backlinks ziya kucinywa, kwaye uGoogle uya kuzikhupha kwindawo yokugcina idatha kwiinyanga ezininzi. Nangona imigangatho ephunyeziweyo iyawa ngokulandelelana, nangayiphi na indlela, iya kuba phezulu kakhulu ngaphambi kokuqhuba i-SEO. Ukunyuswa kwe-SEO iwebhusayithi nganye kufuna indlela yomntu ngamnye. Ixabiso elizayo liya kunikezelwa emva kokuba ingcali ye-SEO iphande indawo yakho ngoncedo kunye nomphathi we-Semalt.
I-Semalt kwakhona iqhuba i-Web Analytics. Yinkqubo yohlalutyo ehlelweyo eveza amathuba amatsha okubeka iliso kwimarike. Ngokuqinisekileyo yenza ukuba abasebenzisi bakwazi ukulandelela izikhundla zokhuphiswano ngokunikezela ngolwazi lweshishini lokuhlalutya. Ngelixa ujonga imeko yewebhusayithi, ikwenza ukuba ukwazi ukubhala umbono ocacileyo ngesikhundla sakho seshishini kwimarike. Olu lwazi lohlalutyo luyenza ukuba ikwazi ukugxininisa iinkcukacha ezibalulekileyo kulo msebenzi wakho uzayo kwaye uzalise indawo yakho ngomxholo osekwe kumagama aphambili, ukuthengwa / ukunxibelelana amakhonkco, kunye namagama aphambili afanelekileyo.
I-Semalt Analytics ikuxelela zonke iinyani malunga nezikhundla zakho zokhuphiswano kwimarike. Ukusetyenziswa ngempumelelo kwale datha kukuvumela ukuba uphumelele ekusebenziseni ukukhangela, sebenzisa umkhankaso wakho wentengiso. Ulwazi olufunyenwe kuhlalutyo lwentengiso lubhengeza amathuba amatsha empahla kunye neenkonzo zokwabiwa, ukongeza uphuculo lwentengiso kwimimandla eyahlukeneyo, kuthathelwa ingqalelo zonke izinto zommandla.
Uhlalutyo lushwankathelwa ngolu hlobo:
Isebenza njani iSemalt Analytics
Nje ukuba ubhalise kwiwebhusayithi yethu, uqala inkqubo yokuqokelela idatha kwaye ufumane ingxelo ebanzi ebonisa indawo yakho yewebhusayithi kunye nesikhundla seokhuphiswano. Ingxelo ikwabandakanya izikhombisi-ndlela ngokwakhiwa kwewebhusayithi ngokungqinelana nemigangatho ye-SEO.
Abo sele benayo iakhawunti banokongeza enye iwebhusayithi kwikhabinet, kwaye iya kuhlaziywa ngokufanelekileyo yinkqubo. Ngelixa indawo isaphononongwa, inkqubo yethu inikezela ukuthengisa amagama aphambili ngokusekwe kwidatha ethathwe kuhlalutyo. La magama aphambili aya kuchaphazela ukwanda kokuya kwindawo. Unokongeza okanye ucime amanye amagama aphambili ngokuthanda.
Sihlalutya uluhlu lwewebhusayithi kwaye silandelela ukuqhubela phambili kwazo iiyure ezingama-24 ngosuku. Ukongeza, siqokelela ulwazi malunga nabantu abakhuphisana nabo. I-Semalt ihlaziya rhoqo indawo yakho yewebhusayithi, ngaloo ndlela ikunikeze isango lokugqibela lokujonga indawo yewebhusayithi kwi-intanethi naphi na xa uthanda. Unokusebenzisa ngokufanayo isiCwangciso seNkqubo yokuSebenzisa (API). Oku kukhetheka kakhulu kuba idatha ivumelanisa ngokuzenzekelayo, yenza ukuba abasebenzisi bakwazi ukuqaphela ulwazi oluphuculweyo. Jonga idatha ehlaziyiweyo yohlalutyo kuyo nayiphi na imithombo oyikhethayo.
Amaxabiso okuhlahlela axhomekeka kwinqanaba elikhethiweyo, jonga uluhlu lweerhafu zethu apha ngezantsi:
UPHANDO-I-99 yeedola ngenyanga (i-1 000 amagama aphambili, iiprojekthi ezili-10, imbali yobudala be-1)
Njengenxalenye yenkqubo yokuphucula i-SEO, inkampani yethu ibonelela ngeevidiyo ezizodwa ukubandakanya abathengi kwishishini lakho. Ukucacisa Ividiyo kubandakanya amanqaku aphambili emisebenzi yenkampani yakho ekhomba kwizibonelelo eziphambili ngokubambisana nawe.
Iingcali zeqela leSemalt zilungiselele kakuhle imisebenzi enzima kakhulu. Zonke zinokubamba incoko kwiilwimi ezahlukeneyo kwaye ziqhube iindibano zokubonisana eziluncedo. Uvavanyo lokusebenza ngempumelelo kukaSemalt luboniswa kuphononongo oluqinisekileyo lwabathengi bethu. Ukusebenza nathi, amathuba okuphumelela asondele kwiipesenti ezilikhulu, ekugqibeleni, uSemalt uya kuba ngumthombo weemali ezingapheliyo. Impumelelo yakho ibonisa uloyiso lwethu!